CrockPot အမဲသားစွပ်ပြုတ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဝက်သားကအာလူးနှင့် sauerkraut စာရွက်ခုတ်
crock အိုး Philly ဒိန်ခဲကင်သို့ကျဆင်းလာ
သံပုရာ meringue ပိုင်ရေခဲသေတ္တာလိုအပ်ပါဘူး
CrockPot အမဲသားစွပ်ပြုတ် ငါ၏အ All- အချိန်အကြိုက်ဆုံးနှေးကွေး cooker အစားအစာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမဲသား, မုန်လာဥ, အာလူးနှင့်ပဲစေ့ (သို့မဟုတ်အစိမ်းပဲ) ၏နူးညွတ်တုံးနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အရသာပါပဲ။ နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသောအစားအစာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဖြည်းဖြည်းချက်ပြုတ်သည့် Beef Stew သည်အန္တိမဖြစ်သည်။
ထမင်းစားချိန်ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့၊ သင်တကယ်လုပ်ရမယ့်အရာအားလုံးကိုထည့်ပေါင်းခြင်းဖြစ်သည် လွယ်ကူသောထောပတ်ဘီစကွတ် ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းဖူးပေါင်မုန့် muffins ထောပတ်နှင့်အတူ slathered ။ သို့မဟုတ်ပါကဟင်းရည်ထဲနှစ်မြုပ်ရန်အတွက်အိမ်လုပ်ပေါင်မုန့်ဖြင့်အစေခံပါ။ လူတိုင်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်!
Slow Cooker Stew အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ
ဒီအမဲသားစွပ်ပြုတ်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ CrockPot စာရွက်တွင်အမဲသားသို့မဟုတ်အမဲသား၊ အမဲသား၊ အာလူး၊ မုန်လာဥနှင့်လတ်ဆတ်သောနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပဲ၊
အမဲသားစွပ်ပြုတ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအသား Chuck ကင်တယ် သင်ကိုယ်တိုင် Cube ထဲသို့ဖြတ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ Chuck သည်ခက်ခဲသော်လည်းအနံ့အရသာရှိသောအသားသည်ပခုံးများနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ရှေ့ဆုံးမှလာသည်။ ၎င်းသည် Crock Pot Beef Stew (သို့) ဝက်သားပခုံးနှင့်ဆင်တူသည့်အရသာရှိသည့်အသားကင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Crock Pot ဝက်သားကိုဆွဲ ) ။ ၎င်းသည်ကြွယ်ဝသော၊ အမဲသားအရသာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးအအေးခံ။ အပူချိန်နှေးကွေးသောကြောင့်အရည်ရွှမ်းကာနူးညံ့သောအခွံဖြစ်လာသည်။
အရသာနှေးသောချက်ပြုတ်အမဲသားစွပ် တကယ့်ကိုစွပ်ပြုတ်ကိုလုပ်တဲ့အရာကအရသာရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ထူထဲတဲ့အမဲသားဟင်းရည်နဲ့ဟင်းပွဲတွေပါ။ ပန်းကန်ကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေရန်၊ CrockPot အမဲသားစွပ်ပြုတ်ကိုဝိုင်နီနှင့်ပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားပါ။ အမဲသားဟင်းရည်တစ်ခွက်အတွက် Cabernet Sauvignon သို့မဟုတ် Merlot ကဲ့သို့သောအရသာရှိလှသောခြောက်သွေ့သောဝိုင်တစ်ခွက်ကိုအစားထိုး။ အမဲသားဟင်းချိုအတွက်အသုံးပြုသောဒယ်အိုးအားဖယ်ရှားပစ်ပါ။ သငျသညျလညျးအခြို့သောခလုတ်မှိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Crock Pot အတွက်အမဲသားစွပ်ပြုတ်လုပ်နည်း
ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကိုချစ်နေစဉ် ဂန္မီးဖိုထိပ်အမဲသားစွပ်ပြုတ် , ဒီလွယ်ကူနှေးကွေး cooker စာရွက်သင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာကိုသွားနေစဉ်ချက်ပြုတ်ကျန်ရစ်နိုင်ပါတယ်! Crock Pot အမဲသားစွပ်ပြုတ်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်အတူတကွလာနှင့်အမဲသားဒါနူးညံ့လာသည်။
မုန့်ညက် - ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်အရောအနှောထဲမှာအမဲသားကိုအင်္ကျီသို့ချ။ , အသုတ်အတွက်သံလွင်ဆီထဲမှာအညိုရောင်။ ဒယ်အိုးလူစုမကျပါနဲ့။ (သင်ဤခြေလှမ်းကိုကျော်သွားနိုင်သည်သို့သော်အညိုရောင်စွပ်ပြုတ်မှကြီးသောအရသာထပ်ပြောသည်) ။
ကြက်သွန်နီကိုဒယ်အိုးထဲ၌အတူတူထားပါ (ကြက်သွန်နီသို့မဟုတ်ဝိုင်နီကိုအသုံးပြုပြီး deglaze ပြုလုပ်ရန်နှင့်အညိုရောင် -bits များကိုသင့် crock အိုးထဲသို့ထည့်ပါ) ။
အရာအားလုံးကိုနှေးကွေးသော cooker ထဲသို့ပေါင်းထည့်ပါ 6qt crock အိုး ) နှင့်အမဲသားနူးညံ့သည်အထိချက်ပြုတ်။ အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မီပဲစေ့များတွင်မွှေပေးပါ။
Crock အိုး၌အမဲသားစွပ်ပြုတ်ချက်ပြုတ်ရန်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး: Crock Pot အမဲသားစွပ်ပြုတ်သည်သတ်မှတ်ထားသောအစားအစာဖြစ်သည်။ အသားကိုနူးညံ့သည်အထိ ၄-၅ နာရီ၊ သို့မဟုတ် ၈-၉ အထိနိမ့်သည်အထိချက်ပြုတ်ပါ။ သင်လိုအပ်လျှင်အပိုဆောင်းနာရီသို့မဟုတ်နွေးစွာထားနိုင်သည်။
Crock အိုး၌အမဲသားစွပ်ပြုတ် Thicken ရန်: ငါ cornstarch slurry (တန်းတူအစိတ်အပိုင်းများ cornstarch နှင့်ရေ) ကိုသုံးပါနှင့်အဆုံးမှာထည့်သွင်း။ မည်သည့် starchy အရသာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် slurry ကိုထည့်ပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။
ကျန် CrockPot အမဲသားစွပ်ပြုတ်
ကျန်ကြွင်းများသည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၃-၄ ရက်ခန့်နေမည်။
အမဲသားစွပ်ပြုတ်ကိုအေးခဲအောင်လုပ်လို့ရလား။ CrockPot Beef Stew အလွန်အေးခဲသောကြောင့်သင်အမြန်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ညများများစားပါ။ ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာများချဲ့ထွင်ရန်တစ်လက်မ၏တစ်လက်မခန့်ကိုချန်ထားပါ။ သင်၏စွပ်ပြုတ်သည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်လေးလကြာနေမည်။
ကြက်သားကြော် - ငါ့သမီးရဲ့အကြိုက်ဆုံး
လက်ငင်းအမဲသားစွပ်ပြုတ် - အရမ်းလွယ်တယ်
အမဲသားစွပ်ပြုတ်စာရွက် - ဂန္ထဝင်
Lamb Stew (Irish Stew) - ချစ်တယ်
အမဲသားမုယောစပါးဟင်းချို - ကျန်းမာရေးနှင့်အရသာ
Crock Pot အမဲသားစွပ်ပြုတ်
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၄ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၄ နာရီ နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson CrockPot အမဲသားစွပ်ပြုတ်သည်ကျွန်ုပ်အချိန်ကုန်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးတစ်အိုးတည်းအစားအစာဖြစ်သည်။ မိသားစုကအမြဲတမ်းချစ်တယ်၊ အရသာရှိတယ်၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့မယုံနိုင်ဘူး။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် အလေးချိန်ပေါင် အမဲသား ဒါမှမဟုတ်အမဲသားစွပ်ပြုတ်
▢၃ ဇွန်း ဂျုံမှုန့်
▢၁ ခွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည် ထိုကဲ့သို့သော V8 အဖြစ်
▢၄ ခွက် အမဲသားဟင်းရည်
▢၁ ဇွန်း Worcestershire ငံပြာရည်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း စမုန်ဖြူ သို့မဟုတ်2လတ်ဆတ် sprigs
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ခြောက်သော Rosemary သို့မဟုတ် 1 လတ်ဆတ် sprig
▢၃ ခွက် အာလူး အခွံနှင့် Cube
▢နှစ် ခွက် မုန်လာဥ 1 လက်မအပိုင်းပိုင်းသို့ဖြတ်ရ၏
▢၁ ခွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရိုးတံ 1 လက်မအပိုင်းပိုင်းသို့ဖြတ်ရ၏
▢¾ ခွက် ပဲ
▢နှစ် ဇွန်း ရေ
မြည်းစမ်းဖို့ဂျုံမှုန့်, ​​ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်နှင့်ဆားငရုတ်ကောင်းပေါင်းစပ်။ မုန့်ညက်အရောအနှောအတွက်အမဲသား Toss ။
အမဲသားနဲ့ကြက်သွန်နီကိုသံလွင်ဆီသေးသေးလေးတွေထဲထည့်ပါ။ ဟင်းရည်အချို့ကိုဒယ်အိုးထဲသို့ထည့်ပြီးအညိုရောင် -bits များကိုခြစ်ပေးပါ။
ပဲနှင့်ပြောင်းဖူးမှလွဲပြီးအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို 6QT slow cooker ထဲသို့ထည့်ပါ။
အမြင့် ၄-၅ နာရီမှ ၈-၉ နာရီအထိသို့မဟုတ်အမဲသားနူးညံ့သည့်အထိချက်ပြုတ်ပါ။
2 ဇွန်းရေနှင့် cornstarch ရောမွှေပါ။ ထူထပ်ဖို့တစ်ချိန်ကစွပ်ပြုတ်သို့အနည်းငယ်နှိုးဆော် (သင်အရောအနှောအားလုံးမလိုအပ်ပေမည်) ။ ပဲထည့်ပါ။
10 မိနစ်ဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်။ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူရာသီ။
သော့ချက်စာလုံးအမဲသားစွပ်ပြုတ် crockpot သင်တန်းအမဲသား, အဓိကသင်တန်း, အနှေး cooker ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။